T5577 Chip ထူထပ်သောကတ်, ATA5577 Chip ထူထပ်သောကတ်, T5577 Shell ကကဒ်, T5577 Encrypted ထူထပ်သောကတ်, T5577 Encrypted ထူထပ်သောဟိုတယ် Card ကို, T5557 Chip ထူထပ်သောကတ်, T5557 Shell ကကဒ်, T5557 Encrypted ထူထပ်သောကတ်, T5557 Encrypted ထူထပ်သောဟိုတယ် Card ကို, T5567 Chip ထူထပ်သောကတ်, T5567 Shell ကကဒ်, T5567 Encrypted ထူထပ်သောကတ်, T5567 Encrypted ထူထပ်သောဟိုတယ် Card ကို
 » RFID Card ကို » ထူသောကတ်
T5577 Chip ထူထပ်သောကတ်, T5577 Shell ကကဒ်, T5577 Encrypted ထူထပ်သောကတ်
ထူသောကတ် ATA5577 Chip ထူထပ်သောကတ်, Atmel T5577 ထူထပ်သောကတ်, T5557 Encrypted ထူထပ်သောကတ်, T5567 Encrypted ထူထပ်သောကတ်, T5577 Chip ထူထပ်သောကတ်, T5577 Encrypted ထူထပ်သောကတ်, T5577 Encrypted ထူထပ်သောဟိုတယ် Card ကို, T5577 လျှို့ဝှက်ကုဒ် Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Card ကို, T5577 လျှို့ဝှက်ကုဒ်ဟိုတယ် Card ကို, T5577 လျှို့ဝှက်ကုဒ်ကားရပ်ရန် Card ကို, T5577 Shell ကကဒ်
T5577 encryption ကို chip ကိုပိုမိုလုံခြုံ.
ဆက်သွယ်ရေးမှုနှုန်း: 9600 ငွေချေးစာချုပ်များ
Read / အချိန်ရေးရန်: 0.1ဒေါ်
အလုပ် mode ကို: ကိုဖတ်ရှုသာ
အကွာအဝေးကိုဖတ်ပါ: 5~ 8cm
Eraser ကြိမ်: > 100000 ကြိမ်
အရွယ်: 85.6× 54 × 1.8mm
သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ: ကို ABS
T5577 chip ကိုလည်း ATA5577 ဟုခေါ်သည်, အဆိုပါ Atmel ကုမ္ပဏီ Multi-function ကို Non-အဆက်အသွယ် R / W ကိုဖော်ထုတ်ခြင်းပေါင်းစည်း circuit ကိုထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်, LF 125KHz ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေးလျှောက်ထား.
T5577 chip ကိုထူးခြားတဲ့နှင့်တည်ငြိမ်စွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်ပါသည်, ကောင်းသော encryption ကို performance ကို (multilevel ခွင့်ပြုချက်), ဒါကြောင့်အဓိကအားဖြင့်ဟိုတယ်တံခါးကိုသော့ခလောက်အသုံးပြုသည်,အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်,ဝိသေသလက္ခဏာ.
T5577 chip ကို T5557 နှင့် T5567 chip ကို၏အဆင့်မြှင့်ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်.
T5577 ထူကဒ်မျက်နှာပြင် print ထုတ်လို့ရတဲ့ကုဒ်, ပိုးမျက်နှာပြင်လိုဂိုနဲ့ပုံစံ.
Seabreeze စမတ်ကဒ် Co. ,, Ltd မှ. T5577 chip ကိုကဒ် Initiative နှင့်ဒေတာများစာဝှက်စနစ်န်ဆောင်မှုကိုပေးစွမ်းသည်.
ဝင်ခွင့်လက်မှတ်, ဟိုတယ်စမတ်တံခါးကိုသော့ခတ်, မီတာ, အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်, ထမင်းစားခန်းခန်းမကဒ်, ယာဉ်ရပ်နားအများကြီး, စသည်တို့ကို.
ငါသည်သင်တို့၏ထုတ်ကုန် T5577 Chip ထူထပ်သော Card ကိုစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်, T5577 Shell ကကဒ်, T5577 Encrypted ထူထပ်သောကတ်
prev: သရက်သီး ID ကိုထူထပ်သောကတ်
နောက်တစ်ခု: အဖြူရောင် ID ကိုထူထပ်သောကတ်
TK4100 Chip ထူထပ်သောကတ်, TK4101 Chip ထူထပ်သောကတ်, 125kHz သတ်မှတ်ခြင်းထူထပ်သောကတ်
အဖြူရောင် ID ကိုထူထပ်သောကတ်